FAQ မေးနေကျ မေးခွန်းများ – Unicode Today
FAQ မေးနေကျ မေးခွန်းများ
၁။ သင်ပုန်းကြီး ဆိုရိုးအတိုင်း စာစီစာရိုက်လုပ်နိုင်ခြင်း၊
၂။ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံအမှားအယွင်း နည်းစေခြင်း၊
၃။ စာလုံးဆင့် ရိုက်ရတာ လွယ်ကူသွားခြင်း၊
၄။ Facebook တွင် စာလွဲမှားပေါ်လာခြင်းမှ အမှန်ဖြစ်လာခြင်း၊
၅။ Facebook တွင် နိုင်ငံခြားဘာသာများကို ဘာသာပြန်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊
၆။ Facebook နှင့် Messenger တို့တွင်ဇော်ဂျီစာကိုပါ အမှန်အတိုင်း မြင်ရခြင်း၊
၇။ ဂူဂဲမြေပုံ တွင်စာအမှန်မြင်ရခြင်း၊
၈။ ဂူဂဲဓာတ်ပုံဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ထားသောစာများကို ပြန်ရိုက်နှိပ်စရာမလိုဘဲ စာဖိုင်အဖြစ် သိမ်းထားနိုင်ခြင်း၊
၉။ ဂူဂဲဓာတ်ပုံဖြင့် လိပ်စာကဒ်မှ ဖုန်းခေါ်လိပ်စာထဲသို့ အလိုလျောက် ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်း၊
၁၀။ ကွန်ပျူတာရော ဖုန်းထဲမှာပါ စာရိုက်စရာမလိုအောင် ဂူဂဲလက်ရေးဖြင့် ရေးသားနိုင်ခြင်း၊
၁၁။ ဂူဂဲဘာသာပြန်စနစ်ဖြင့် ဘာသာအမျိုးမျိုး ပြန်ဆိုနိုင်ခြင်း၊
၁၂။ Voice Tra စနစ်သုံး၍ ဘာသာအမျိုးမျိုးသို့ စကားပြောရုံဖြင့် ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ခြင်း၊
၁၃။ မော်ကား GPS စနစ်များတွင် မြန်မာစာ မှန်ကန်လာခြင်း၊
၁၄။ ဖုန်းနှင့် ကွန်ပျူတာတို့တွင် မြန်မာစာစနစ် အသင့်ပါဝင်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ထည့်ခိုင်းစရာမလိုခြင်း၊ ငွေကုန်သက်သာခြင်း၊
၁၅။ ဖုန်းခေါ်လိပ်စာတွင် မြန်မာအမည်များအစီအစဉ်တကျရှိ၍ ရှာရလွယ်ကူခြင်း၊
၁၆။ ဂူဂဲတွင်ရှာပါက စာမှန်လာခြင်း၊
၁၇။ အစိုးရနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရသော ရုံးလုပ်ငန်းများတွင် အဆင်ပြေလာခြင်း၊
၁၈။ ဗဟုသုတပွားစေမည့် ဝီကီပီးဒီးယား ကိုဖတ်ရှုနိုင်ခြင်း၊
၁၉။ Facebook တွင်အင်္ဂလိပ်လို ဖြစ်နေသည်များကို မြန်မာလိုဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ခြင်း။
၂၀။ တိုင်းရင်းသား ဘာသာ စာပေများပါ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း
၂၁။ ဂူဂဲဘာသာပြန်စနစ်တွင် နိုင်ငံခြားဘာသာဖြင့်ရေးထားသော ဆိုင်းဘုတ်များ၊ စာအုပ်များ၊ အစားအသောက် ပါဆယ်ထုတ်များကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုနိုင်ခြင်း
Android Phone တွေမှာ ယူနီကုဒ်ဖောင့်သုံးချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
မိမိသုံးတဲ့ စက်ပစ္စည်းထဲမှာ ယူနီကုဒ်ဖောင့်ရှိရပါမယ်။ စာရိုက်ဖို့ Keyboard လက်ကွက်ရှိရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် ယူနီကုဒ်ဖောင့်စနစ်သုံးလို့ရပါပြီ။ အခုချိန်ခါမှာ မည်သည့်ပစ္စည်းပဲဝယ်ဝယ် ယူနီကုဒ်ဖောင့်စနစ်ပါလာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ပြန်ထည့်သွင်းရပါမယ်။ ဖောင့်စနစ်ပြန်ထည့်သွင်းတဲ့ နည်းလမ်းကတော့ ဖုန်းအမျိုးအစား တခုနှင့်တခု ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။
အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းသုံး ၃ ခုကတော့
၁။ Language & Input ကနေပြောင်း လို့ရတာရှိတယ်
– (Sumsang, Huawei စသည့်)
– (English ကိုအပေါ်ကထား၊ ယူနီကုဒ်ကို ဒုတိယထား)
၂။ Display သို့မဟုတ် Theme Style မှာ Default font ပြန်ထားပေး ရတာရှိတယ်
– Setting >> Display >> Font Style (သို့) System Font >> Default Font ကိုရွေး
– မိမိကြိုက်တဲ့ဖောင့်ကို iFont app သုံးပြီးထည့်လို့ရတယ်။
၃။ ဖုန်း System ကို Update လုပ်လိုက်ရင် ယူနီကုဒ် ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။
iPhone, iPad ယူနီကုဒ်သုံးချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ?
iOS စနစ်မှာ မြန်မာဖောင့်ပါလာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်၊ စာရိုက်ဖို Keyboard လက်ကွက်တခုပဲလိုပါတယ်။ ttKeyboard ကို iTune ကနေရယူနိုင်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့် profile ဖျက်ရပါတယ်။ မိမိနှစ်သက်ရာဖောင့်ကို myFont App ကနေ ပြန်လည်သွင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Windows ကွန်ပျူတာမှာ ဘယ်လိုသုံးရသလဲ?
Windows 8 ကစပြီး ဖောင့်နှင့် Keyboard လက်ကွက်ထည့်စရာလိုဘဲ သုံးလို့ရပါတယ်။ သင်ပုန်းကြီး သတ်ပုံအတိုင်းစာရိုက်ချင်ရင်တော့ Keyman သို့မဟုတ် Keymagic Keyboard software တခုခုထည့်သုံးရပါမယ်။ Windows 10 April Update မှာလည်း သင်ပုန်းကြီး သတ်ပုံအတိုင်းစာရိုက်နိုင်တဲ့ လက်ကွက်ပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ မိမိနှစ်သက်ရာဖောင့်ကိုလည်း ထည့်သွင်းသုံးစွဲ နိုင်ပါတယ်။
Windows7သုံးစွဲသူအနေဖြင့် ဖောင့်နှင့် keyboard လက်ကွက်ထည့်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဘယ်ဖောင့် ဘယ် Keyboard လက်ကွက်တွေ သုံးရမလဲ?
Smart Phone ဖြစ်ဖြစ်၊ PC ကွန်ပျူတာဖြစ်ဖြစ် မူလပါလာပြီးသား ဖောင့်နှင့်လက်ကွက်ကို အသုံးပြုနိုင်သလို၊ မိမိနှစ်သက်ရာ ကိုလည်းထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- Samsung, ASUS ဖုန်းတွေမှာ လက်ကွက်ပါပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် PlayStore က Google Gboard ကိုလည်း ထည့်သွင်းသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာတွေအတွက်လည်း မူလပါပြီးသား စနစ်များအပြင် Padauk Font, Pyidaungsu Font, Google Myanmar Font များကိုသုံးစွဲနိုင်သလို Keyman, Keymagic Keyboard လက်ကွက်များကိုလည်းသုံးစွဲနိုင်
ကွန်ပျူတာက Chrome, FireFox Browser တွေမှာ စာမမှန်ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Content font setting ကို ဇော်ဂျီတမျိုးတည်း သတ်မှတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ မူလ font setting (default) ပြန်ထားပေးပါက မှန်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ပျူတာက Browser တွေမှာ ယူနီကုဒ်ရော ဇော်ဂျီပါ ၂မျိုးစလုံး အမှန်ပေါ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Font tagger Extension သို့မဟုတ် MUA Extension တခုခု ထည့်ထားရင် ၂မျိုးစလုံး အမှန်မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ Google က ရှာဖွေပြီး ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
သင်္ချာဆိုင်ရာ ၁၆ ကိန်းအခြေခံသော ဂဏန်းစဉ် U+1000 မှ U+109F ထိ အရေအတွက် ၁၆၀ တွင်မြန်မာအက္ခရာများကို ကိုယ်စားပြုသော ကိန်းစနစ်ကို Unicode/ISO10646 ဗားရှင်း၃မှစ၍ ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တဖန် ဗားရှင်း ၆.၃ တွင် U+AA60 U+AA7F ထိ လည်းကောင်း၊ ဗားရှင်း ၇ တွင် U+A9E0 မှ U+A9FF ထိ လည်းကောင်း အသီသီးသတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာယူနီကုဒ် စနစ်တွင် ပါဝင်လာသော အက္ခရာများမှာ မြန်မာ၊ ပါဠိ သက္ကတ၊ မွန်၊ စကောကရင်၊ အနောက်ပိုးကရင်၊ အရှေ့ပိုးကရင်၊ ပအိုဝ်း၊ ရူမဲပလောင်၊ ရှမ်း၊ ခန္တီးရှမ်း၊ ကယား၊ ရှမ်းပါဠိ၊ တိုင်းလီ စသည့် တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အက္ခရာများ ပါဝင်လာပါသည်။
ယူနီကုဒ်စံကို မလိုက်နာသော ဖောင့်တခုခုကို သုံးစွဲနေမယ်ဆိုရင် သင်သုံးစွဲနေသော ဖောင့်ဟာ အခြားသူတစ်ဦး−ဦးက သုံးစွဲနေသော ဖောင့်နှင့် စနစ်အားဖြင့် မတူညီတော့ဘူးဆိုရင် အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဖောင့်မှာ ရရစ်အကြီး စာလုံးဖြစ်နေပေမယ့် အခြားသူတစ်ဦးမှာတော့ ရှမ်းအက္ခရာြ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။codepointတခုတည်း တူနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သာ ယူနီကုဒ် စံဖောင့်ကို သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် ဒီလိုပြဿနာ မဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါဘူး။ ယူနီကုဒ်စံစနစ်မှာ သုံးတဲ့ ရရစ်ဟာ ဘယ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် အမှန်တိုင်းပေါ်မှာပါ။
ဘယ်ဖောင့်တွေက ယူနီကုဒ်စံကို လိုက်နာသလဲ?
ယူနီကုဒ်စံကိုလိုက်နာပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဖောင့် အများအပြား ရှိပါတယ်။ အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်သော ဖောင့်အချို့မှာ− Myanmar3, Padauk, Parabike, Masterpiece, Win Uni Innwa, Tharlon, MyMyanmar နှင့် Pyidaungsu ဖောင့်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်
၂မျိုးမြင်ဖောင့်ဆိုတာ ယူနီကုဒ်စံစနစ်အတိုင်း ရေးနိုင်၊ဖတ်နိုင်ရုံမကဘဲ ဇော်ဂျီစနစ်ဖြင့် ရေးသားထားသော စာများကိုလည်း ၈၀%ခန့် ဖတ်ရှုနားလည်နိုင်သော ဖောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေးသားတဲ့အခါမှာ တော့ ယူနီကုဒ် လက်ကွက်ဖြင့်သာ ရေးသားမှ မှန်ကန်နိုင်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်စံစနစ် ပြောင်းလဲသုံးစွဲရေးအတွက် တွန်းအားတစ်ရပ်အနေဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်ကီးဘုတ် လက်ကွက်ကိုသုံးစွဲရမလဲ? ဘယ်ဟာကစံလက်ကွက်ဖြစ်ပါလဲ?
ကီးဘုတ်လက်ကွက်ကို နိုင်ငံတကာစံ သတ်မှတ်ချက်တော့ မရှိသေးပါဘူး။ Myanmar3 လက်ကွက်ကိုတော့ Local စံတခုအဖြစ် သုံးစွဲ နေကြပြီဖြစ်ပြီး Microsoft မှထုတ်လုပ်လိုက်သော မြန်မာလက်ကွက်သည်လည်း Myanmar3 လက်ကွက်အတိုင်း ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။
ဇော်ဂျီဆက်သုံးနေရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ?
တိုင်းရင်းသားဘာသာတွေ ကိုသုံးစွဲလို့မရတော့ဘူး။ ဂူးဂဲမြေပုံ၊ ဂူဂဲ ဘာသာပြန်စနစ်၊ facebook စတာတွေမှာ မြန်မာစာကို မှန်ကန်စွာ မမြင်နိုင်တော့ဘူး။ ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာမှာ ဘာသာဗေဒ၊ ဘာသာစကား ဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင်လုပ်ဆောင်နိုင်တာကို ရှေ့မဆက်နိုင်တော့လို့ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ အဟန့်အတား ဖြစ်စေပါတယ်။
ဇော်ဂျီကို Unicode စံစနစ်ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရသလား?
မရပါဘူး။ ဇော်ဂျီက မြန်မာဘာသာဆိုင်ရာ အခြေခံကျတဲ့ ဗျည်းစဉ် သရစဉ် ၊ ရေးထုံးဆိုင်ရာ အချက်တွေနဲ့ မကိုက်ညီလို့ Unicode အဖွဲ့စည်းကရော ISO အဖွဲ့စည်းကပါ ဒီအဆိုပြုလွှာကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ အရေးတယူ ဆောင်ရွက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။
ဇော်ဂျီကို Unicode အဆင့်သို့ ပြုပြင် မြှင့်တင်လို့ရသလား?
ရပါတယ်။ ဒါကျွန်တော်တို့ အကြံပြုနေတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းမှားနေပါတယ်။ Unicode ဆိုတာဖောင့် လည်းမဟုတ်သလို လက်ကွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သုံးစွဲသူမြင်နေရတဲ့ ရုပ်ဆင်းတွေ လက်ကွက်နေရာတွေ သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူး။ အက္ခရာတွေသိမ်းဆည်းတဲ့စနစ် ဘယ်လို ရှေ့နောက်ထား စီစဉ်သလဲ ဆိုတဲ့ အချက်ကိုသတ်မှတ်တာပါ။
သုံးစွဲသူက ဘယ်လို ရိုက်နှိပ်ပေးရမယ် ဘယ်လိုပြန်ပြပေးရမယ်ဆိုတာကိုတော့ ကန့်သတ်မထားပါဘူး။
Unicode font နဲ့ Keyboard ကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းရသလဲ?
နောက်ဆုံးထွက် Windows နှင့် Android တွေမှာ ထည့်သွင်းပေး စရာမလိုဘူး ရှိပြီသား။ IOS အတွက်တော့ မည်သည့် Unicode font profile မဆိုထည့်သွင်း နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ပြည်ထောင်စုဖောင့် နှင့် tt Keyboard လက်ကွက်ထည့်ရပါမယ်။ အဟောင်းတွေအတွက်တော့ နည်းပညာ အကူအညီ လိုကောင်းလိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီအပြောင်းအလဲကြီး အောင်မြင်သွားဖို့ ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ?
အတိတ်ကို အတိတ်မှာထားခဲ့ပြီး ရှေ့ဆက်သွားဖို့လိုပါတယ်။ ပန်းတိုင်တခုတည်းထားပြီး အတူတကွလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
Unicode ဆိုတာဘာလဲ? ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ
နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်က- ရှေဆက်သွားဖို့ရာ ထိရောက်မှုရှိအောင် စီမံနိုင်မယ့် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရှိဖို့လိုပါတယ်။
This Week: 12541